FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AMERIKANA PIT BULL TERRIER - ALIKA
Leia ilay Pit Bull misy orona manga ary Sailor ilay Pit Bull an'ny orona mena, samy voavonjy avy amin'ny toeram-pialofana be mpamono olona.
Lisitry ny alika amerikana omby omby terrier mifangaro
Ny Pit Bull avy hatrany dia mamely ny iray ho alika mahery, fitiavana ary finiavana maharitra. Ny loha toy ny biriky, izay mivelatra indrindra eo anelanelan'ny takolaka (hipetrahana ny valanoranony matanjaka), dia entina amin'ny vozony matevina miforitra sy voafaritra tsara. Ny hatoka dia mihazakazaka mankamin'ny tratra lalina sy matevina ary milamina tsara. Ny American Pit Bull dia alika be hozatra, be volo, nefa mailaka ary matanjaka be noho ny habeny. Voakapa ny sofina amin'ny ankapobeny, na izany aza tsy voatery. Tsy eken'ny UKC na ny ADBA ny rambony mihidy. Boribory ny maso. Samy tsy manaiky ny ADBA na ny UKC maso manga na merle ny lokon'ny palitao. Ny amerikana Pitbull Registry dia manaiky palitao merle. Ny nify dia tokony mamorona manaikitra hety. Ny palitaony dia vita amin'ny volo matevina, fohy ary mamiratra. Ny loko rehetra dia ekena. Ny aloky ny volontsôkôla hatramin'ny mena miaraka amin'ny orona mena / volontsôkôlà mifanentana dia antsoina hoe Bull Bull an'ny orona mena. Ny aloky ny volondavenona miaraka amin'ny orona volondavenona mifanentana dia antsoina hoe Pit Bulls-orona manga.
Ny American Pit Bull Terrier (APBT) dia maniry mafy ny hampifaly azy. Ny APBT dia niteraka valiny ara-pihetseham-po sy mitombina ary tsy mitombina noho ny karazana hafa misy ankehitriny. Tsy alika mihitsy ireo alika mpankahala olona na mpihinana olona. Ny fironana mahery vaika mahery setra dia mankany amin'ny alika sy biby hafa fa tsy olona. Na izany aza, raha tsara izy ireo ifaneraserana miaraka amin'ny hentitra, nefa milamina, matoky tena, mpitarika fonosana tsy miova , tsy ho mahery setra akory amin'izy ireo. Ny American Pit Bull Terrier dia biby fiompy tsara toetra, mahatsikaiky, mahatoky ary be fitiavana izay tsara amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Saika mankatò foana, mazoto hatrany hampifaly ny tompony. Alika mpiambina be herim-po sy manan-tsaina izy io izay tena feno herisetra. Tena miaro ny tompony sy ny fananan'ny tompony izy io, hiady amin'ny fahavalo mandra-pahafatiny. Sariaka be matetika izy io, saingy manana fahaizana hafahafa hahafantatra hoe mila miaro izy ary rehefa milamina ny zava-drehetra. Ny Amerikanina Pit Bull Terrier dia mety minia manana tompony malemy fanahy ary mila tanana mafy. Amin'ny ankapobeny dia tsy maninona izy ireo amin'ny biby hafa, raha notezaina niaraka tamin'ny zaza. Tena sariaka izy ireo, saingy tsy atoro ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​satria ny ankamaroan'ny olona tsy mahatakatra ny fomba mitaiza tsara ary mitsabo alika . Mipoitra ny olana rehefa tsy mahazo ny olona iray fihetsika alika voajanahary , mahita ny alika toy ny manana fihetsem-pon'ny olombelona , ary miafara amin'ny alika izay mieritreritra fa izy no sefon'ny trano. Ho an'ny alika kely kokoa, tsy mahery vaika, indraindray ny olona dia afaka miala amin'izany, na izany aza, ho an'ny karazana matanjaka iray dia tena mila mahatakatra sy manaraka ity fomba fiasa mitazona alika ity ny olona. Tena tsara miaraka amin'ny ankizy ao amin'ny fianakaviana, manana fandeferana amin'ny fanaintainana mafy izy ireo ary hizaka am-pifaliana ny lalao milanja zaza. Toy ny karazana rehetra, dia tsy tokony avela irery miaraka amin'ny ankizy tsy mahazatra izy ireo. Ampiasaina ho alika fiompiana miasa manodidina, dia nantsoina hoe 'soavalin'ilay mahantra.' Taty aoriana dia nampiasaina ho alika mpiady izy ireo, ny American Pit Bull mahery any Etazonia dia mety handeha amin'ny tendan'ny alika hafahafa. Farafahakeliny Training , miaraka amin'ny habetsaky ny fanatanjahan-tena mety ary mpitarika fonosana mafy orina, dia hamokatra alika milamina sy mankatò. hifanerasera tena tsara rehefa tanora hiadiana amin'ny fironana mahery setra ary aza hadino ny mitazona ny alika rehefa misy alika hafa. Ampianaro manaja ny olombelona ity alika ity amin'ny tsy famelana azy mitsambikina ary tsy mamela azy hiditra amin'ny vavahady aloha. Ny olombelona dia tsy maintsy manao ny alika ombelahin-tongony eo anilany na ao aoriany rehefa mandeha . Izy io dia nanome valiny miavaka amin'ny maha-mpiambina ny fananana azy, nefa kosa dia raisina ho toy ny alika mpiara-miasa. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miasa eo ambanin'ny tsipika mpitondra tokana ary voafaritra mazava tsara ary apetraka ny fitsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Rehefa voaofana tsara sy ifaneraserana ara-dalàna dia alika tena tsara sy mpiara-mitory amin'ny fianakaviana lehibe izany. Mampalahelo fa misy ny misafidy ny hampiroborobo ny fironana miady amin'ny karazany, ka manome anarana ratsy azy.
Hahavony: 14 - 24 santimetatra (35 - 60 cm)
Milanja: 22 - 78 pounds (10 - 35 kg)
Ny Amerikanina Pit Bull Terrier dia mahery sy mailaka. Ny lanjan'ny tena izy sy ny haavony dia tsy zava-dehibe kokoa noho ny refy marina amin'ny lanjan'ny lanja.
Ny hevi-diso mahazatra dia ny APBT dia hozatra voafatotra hozatra izay milanja manodidina ny 39 kilao na mihoatra ary amin'ny ankapobeny tsy io no maro an'isa. Ny ankamaroan'ny APBT izay lehibe dia niampita tamin'ny karazany hafa ary nantsoina American Bullies . Matetika ny vahoaka ankapobeny dia mahazo ny American Bullies mifangaro amin'ny American Pitbull Terriers. American Pitbull Terrier vs. American Bully
Karazana salama amin'ny ankapobeny, na dia mora voan'ny tsimok'aretin'ny valahana aza ny sasany, areti-mandringana, lozisialy ahitra ary aretim-po hatrany am-bohony.
Tsy maninona ny lavaka ao anaty trano iray raha toa ka zatra ampiasaina tsara izy ireo. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokontany raha toa ka manana fanatanjahan-tena ampy izy ireo. Aleo ny toetrandro mafana.
Ny American Pit Bull Terriers dia tokony hanana fanatanjahan-tena matetika ary mila raisina mandeha lava isan'andro .
Tokony ho 12 taona.
sary ny Chihuahua sy dachshund Mix
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Borosio matetika amin'ny borosy mafy volo, ary sasao ny shampooing na maina raha ilaina izany. Ny fikosehana amin'ny lamba famaohana na chamois no hampamirapiratra ny palitao. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Namboarina tamin'ny alika Bull sy Terrier, ny American Pit Bull Terrier dia azo zahana hatramin'ny fiandohan'ny taona 1800 amin'ny antsoina ankehitriny hoe United Kingdom. Alika mpiompy manodidina azy ireo izy ireo, miasa toy ny alika omby / kisoa ny fiompiana. Ny sasany nisafidy ny hanova ny talentany ho amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny ady lavaka. Ny fahamendrehan'ny karazany sy ny heriny miaraka aminy dia tsy manam-paharoa amin'ny tontolon'ny alika. Na dia manan-karena sy mahavariana tahaka ny tantaran'ny karazany aza izy, ny hoavin'ny Pit Bull dia mendrika ny hanome fanazavana bebe kokoa. Ny mpanohana sasany amin'ny karazany dia manambara fa ity karazana ity no bulldog tany am-boalohany. Ny fanontana taloha sy ny vatan-kazo dia mampiseho antony hinoana an'izany. Asehon'izy ireo ny alika izay mitovy amin'ny karazany ankehitriny, manao zavatra mbola hain'ny alika. Raha mila fanazavana fanampiny momba an'io teoria io ianao dia afaka mamaky ny boky nosoratan'i Richard F. Stratton. Ny APBT, araka ny fisoratan'ny UKC, dia karazana alika iray ary tsy miresaka momba ny mongel karazana mpiady ratsy saina fotsiny. Tamin'ny fotoana iray, ny Pit Bull dia nanana laza malaza manodidina ny sakaiza be fitiavana sy azo itokisana. Mampalahelo fa lasa mariky ny karazan'olon-dratsy nifidy ny hampiofana ireo alika ireo ny karazany. Ireo karazan'olona tompon'andraikitra voalohany amin'ny fandrarana sy ny fihazana ody izay efa nanapotika an'i Etazonia Ny fampahalalam-baovao, na izany aza, dia tsy tokony holazaina, satria tompon'andraikitra amin'ny fampitomboana ireo tranga mitoka-monina amin'ny fomba tsy miato sy manintona . Ny ankamaroan'ny Pit Bulls dia alika toy ny alika ao amin'ny fianakaviana na fanatanjahan-tena toy ny fanesorana lanja, saingy zara raha miresaka izany ny haino aman-jery. Nahazo fomba fijery misimisy kokoa izy ireo mody milaza fa ny Pit Bulls rehetra dia atolotry ny mpiady. Amin'ny tranga marobe rehefa mitatitra momba ny fanafihana Pit Bull ny haino aman-jery, dia tsy Pit Bull akory izany akory, fa karazan'olona mifangaro, na karazana omby hafa miaraka. Ohatra, nisy tatitra momba ny vaovao KYW tany Filadelfia momba ny Pit Bull roa izay manafika olona iray. Ireo alika dia tsy nitovy tamin'ny Pit Bulls, fa ny Boxer mifangaro. Nantsoina ny tobim-baovao ary nanontany izy ireo raha fantatr'izy ireo fa ireo alika ireo dia tena Amerikanina Pit Bull Terriers, na karazana omby hafa, na mutts, momba an'io. Nanambara izy ireo fa tsy mahalala, ary hiantso ny biraon'ny polisy hanamarina izany vaovao izany. Nanontaniana izy ireo hoe ahoana no ahafahan'izy ireo mitory zavatra izay tsy azony antoka. Tsy nanana valiny izy ireo ary tsy azon'izy ireo antoka ny fiompiana alika. Na dia efa niaiky tamin'ny telefaona aza fa tsy fantany akory ny karazana alika resahina, dia niantso ireo alika Pit Bulls hatrany izy ireo tamin'ny tatitra nataony. Fa maninona Satria ny anarana Pit Bull no hisarika ny sain'ny be sy ny maro. Ny hoavin'ny Pit Bull dia angamba tsy namboarina intsony ary ny tsirairay no tokony homena tsiny afa-tsy ilay alika ihany. Ity alika tena tsy mivadika ity dia mihevitra ny hampifaly ny tompony, ary mampihomehy fa io no fototr'ilay fanafoanana azy manokana. Miaraka amin'ity filàna ity ny hampifaly dia fahaizana miavaka amin'ny karazany rehetra. Jack Dempsy, Teddy Roosevelt ary Jack Johnson dia olona vitsivitsy ihany no nanana Pit Bulls. Ny Pit Bulls dia miavaka amin'ny asan'ny canine rehetra, ao anatin'izany ny fiompiana, fiambenana, fihazana, fiambenana, fiambenana sarety ary fikolokoloana. Pit Pit iray antsoina hoe Banddog Dread mitazona anaram-boninkazo miasa amina kaninina mihoatra ny karazana hafa. Diane Jessup no anaran'ilay tompony ary azonao atao ny manondro ny bokiny 'The Working Pit Bull.' Milaza ny zava-bitan'i Dread rehetra izy io. Tena mahavita asa maro ireo alika ireo. Ny mahasamihafa ny Pits sy ny American Staffordshire Terriers sarotra izany. Na ny mpiompy aza tsy mety manaiky. Ny tena maha samy hafa azy dia ny ra. Amstaff dia alika fampisehoana ary mpiady alika matetika dia tsy mampiasa alika misy rà Amstaff. Rehefa mandeha ny fotoana dia hisy fahasamihafana bebe kokoa. Betsaka no indroa voasoratra ho Amstaff miaraka amin'ny AKC sy Pits miaraka amin'ny UKC.
NAPDR = Registra an'ny alika mena any Amerika Avaratra
PBFSA = Federasiona Pit Bull any Afrika Atsimo
Ace the Pit Bull Terrier amin'ny 1 1/2 taona
'Yaya dia APBT 5 taona izaho sy ny vadiko dia nanavotra ahy tao amin'ny Humane Society tao Erie, PA. Izy dia tsara miaraka amin'ny alika hafa ary indrindra ny tena tia raha olona. Tena tsy mivadika izy ary tia mamely anay amin'ny oroka Pitbull. Rehefa nandalo fatiantoka mahatsiravina tao amin'ny fianakaviana izy roa taona lasa izay, izy no 'therapist' tsara indrindra nangatahina. Mety ho mafy loha izy indraindray, noho io toetra io azon'ny vadiko! '
Dixie ilay brindle manga amerikana Pit Bull Terrier amin'ny maha alika azy amin'ny 2 volana
'Ity i Roxy zanako vavy amin'ny 2 volana sy sasany. Izy no lavaka voalohany nananako ary tsy maintsy lazaiko ... tsy hanana alika hafa mihitsy aho FA Pitbulls! Raiki-pitia tamin'io karazany io aho 3 taona lasa izay rehefa nanao vakansy tany California aho (mipetraka any Washington aho) ary nandeha namonjy tany Pitbull ... niaraka tamin'izay dia voahodidina Pitbulls 15-20 aho. Mbola tsy nanana alika be dia be indray mandeha aho DYING ny saiko !!! Fantatro nanomboka tamin'io andro io fa tsy misy alika hafa tadiaviko FA Pitbull. Tsy misy olona hahatakatra an'i Pitbull raha tsy hoe manana izy ireo. Ny hany zavatra tadiavin'izy ireo eto amin'izao tontolo izao, izay iankinan'izy ireo dia ny mampifaly anao. Mampihomehy anao ary ataovy namana fotsiny. Tsy misy izany alika ratsy izany ... tompona ratsy fotsiny. Mahasosotra ahy ny maheno ireo tantara rehetra momba ny Pitbulls manafika ankizy kely na manaikitra ny tompony ny ankamaroan'ireny alika hitanao amin'ny vaovao ireny na dia TSY PITBullS aza !!! Izy rehetra dia mutts avokoa. Ahoana no ahasahiany milaza ny atao hoe Pitbull nefa ny ankamaroan'ireo olona ireo dia mbola tsy nahita Pitbull mihitsy. Tsy misy mino ahy rehefa miteny aho hoe Roxy dia madio satria 'kely loatra izy ka tsy Pitbull madio' nefa raha ny tena izy dia alika antonony ny Pitbull Terriers - Ny Roxy dia 47 kilao izao ary hozatra madio! Nahazo ilay tiako hiantsoana azy hoe 'ny Pitbull wiggle' izy rehefa tena faly izy fa mihetsiketsika ny vatany iray manontolo ary 'mitsiky' amiko izy. (Azoko atao ny manohy miresaka momba an'i Roxy mandrakizay!) Manafana ny foko izy ary te hitomany aho indraindray mijery azy fotsiny, ary faly manao ahoana aho. Alika tapa-kevitra izy ireo, ary manana fientanam-po sy afo be eo imasony (toy ny reniny!). Tsy haiko izay hataoko raha tsy eo ny zazavaviko !!! '
dachshund & fifangaroana pincher kely
Hijery ohatra misimisy momba ny American Pit Bull Terrier
zanak'alika pitbulls fotsy sy volontany